Dr.Farole oo la kulmey Safiirka Yemen 28 Dec 28, 2012 - 7:56:02 AM
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr.Cabdiraxman Maxamed Farole ayaa maanta 28 December,2012 waxa uu qaabiley safiirka Yemen u fadhiya Somalia Ambassador Cali Mascuud iyo xubno ka socdey dalka Yemen oo wehelinayey.
Wafidgan ayaa waxa uu madaxweynuhu kula kulmey xerada Ciidanka Badda Puntland oo ay ku jiraan muwaadiniin u dhashey dalka Yemen oo dhowaan PMPF ay ka soo badbaadiyeen kooxo burcad badeed ah oo haystaye muddo ku dhow saddex sanno.
Wasiiro ka tirsan Dowladda ,taliyaasha Ciidamada kala duwan ,culimaa’udiin ,waxgarad ,Issimo iyo ganacsato ayaa qayb ka ahaa kulankan .
Safiirku waxa uu Puntland shacab iyo dowladba uga mahadceliyey sida ay iskugu xilqaaameen badbaadinta dadkan muddada badan loo haystey Afduubka,isagoona goobta ka akhriyey warqad mahadnaq ah oo soo dhiibey Taliyaha guud ee amaanka iyo Sirdoonka dalka Yemen.
Ciidanka Badda Puntland ayaa madasha ku soo bandhigey marxaladihii kala duwanaa uu soo marey hawlgalkii lagu soo furtey la-haystayaasha oo qaatey laba todobaad,waxana ay ahaayeen ciidanku kuwa amaanta badan dhamaan masuuliyiintu u soo jeedisey hogaankooda.
La-haystayaashii u dhashey Dalka Yemen oo laga soo furety Markabka Iceberg 1 ayaa ka duuley garoonka diyaaradaha Bossaso ,waxana lagu wadaa in dhowaan sidan oo kale dalalkooda u safraan badmaaxiinta kale.